इलाम पुगेर शुरु गरे डा. केसीले १६ औं अनसन
काठमाडौं– डा. गोविन्द केसीले १६ औं अनशन शुरु गरेका छन् । आफूसँग सहमति भए अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य विधयेक नआउने भएपछि डा. केसीले आफ्नो अनशन शुरु गरेका हुन् ।
डा. केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पाँच बजेबाट अनशन शुरु गरेका हुन् । उनले देशमा देखिएको भद्रगोल, अराजकता र दण्डहीनताको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने उल्लखे गरेका गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरुका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेको आरोप लगाएका छन् ।
नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान मर्ज, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी स्थापना काठमाडौं – नेपाल खाद्य सस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड एक आपसमा गाभिई ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी’ नामक कम्पनी स्थापना भएको छ । सरकारले ती दुई निकायलाई गा...